Uptodate MM - Page 98 of 141 - Media and Entertainment
ရထားလမ်းဘေးမှာ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရပြီး အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ တတိယနှစ်ကျောင်းသူလေး မဥမ္မာခိုင် အမှု တရားခံ မမိသေးပါ
By Uptodate MMPosted on April 5, 2019
အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ တတိယနှစ်ကျောင်းသူ မဥမ္မာခိုင် အမှု တရားခံ မမိသေးပါ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်အောင်မြို့နယ်၊ ချောင်းရိုးကျေးရွာကနေ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာ မြို့နယ်မှာ လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရင်း အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ တတိယနှစ်ကျောင်းသူ မဥမ္မာခိုင် သေဆုံးခဲ့မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက […]
ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ အလှူမင်္ဂလာပွဲကြီးမှာ ရွှေမိုးငွေမိုး ရွာသွန်းပေးခဲ့တဲ့ နေတိုးတို့မိသားစုရဲ့ဗီဒီယို
ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် မင်းသားချော နေတိုးကတော့ လက်ရှိမှာ မွေးရပ်မြေ မြန်အောင်မြို့လေးကို ပြန်လည်ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အနှစ် (၂၀) ကျော်ကြာမှ မွေးရပ်မြေကို ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ နေတိုးက ညီလေးမင်းသွေးတည်ထားခဲ့တဲ့ ဘုရားကြီးရဲ့ထီးတော်တင်ပွဲကို သွားရောက်ကျင်းပပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစု […]
မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးတွင် ၂ နှစ်တာ အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားပေးရန် အမေရိကန် ဆရာမများ ကျမ်းကျိန်
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပညာသင်ကြားရေးကဏ္ဍတွင် ၂ နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အမေရိကန် ပိစ်ကော စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုမှုကို ရန်ကုန်မြို့၊ Summit Parkview Hotel တွင် ဧပြီ ၅ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စတုတ္ထအဖွဲ့အဖြစ်လာရောက်မည့် အမေရိကန် ပိစ်ကော […]
နိုင်ငံတော်ရဲ့အဆင့်အမြင့်ဆုံးအခမ်းအနားကိုတက်ပြီး ကျပ်သိန်းပေါင်း၆၅၁၆၀လာလှူသွားပေမယ့် သူနားမှာ နားကပ်တောင် မဝတ်တဲ့ ကမ္ဘောဇရဲ့ချစ်သမီးလေး နိုင်ငံတော်ရဲ့အဆင့်အမြင့်ဆုံးအခမ်းအနားကိုတက်ပြီး ကျပ်သိန်းပေါင်း၆၅၁၆၀လာလှူသွားတဲ့သူနားမှာလဲ စိန်နားကပ်အပြူးကြီးမတွေ့ရသလိုလည်ပင်းမှာလဲ ဧရာမရွှေဆွဲကြိုး အလေးကြီးမတွေ့ရပြန်ပါဘူး ဘဏ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာကိုကမ္ဘာပတ်ပြီး တစိုက်မတ်မတ်လေ့လာသင်ကြားခဲ့သူဖြစ်ပြီး ထူးချွန်တဲ့ပညာရှင်တယောက်အဖြစ်ဆုတွေလည်း ရထားတဲ့သူကတော့သမာအာဇီဝကျကျချမ်းသာလာတဲ့ ဘဏ်သူဌေးဦးအောင်ကိုဝင်း(ဆရာကျောင်း)ရဲ့သမီး ရိုးသားတဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်းသူလေးဖြစ်ပါတယ်. Credit – Gabarmyay […]
ဥပေက္ခာတွေနဲ့ နေသားကျသွားတဲ့အချိန်ပဲ… အချစ်ကို လိုနေချိန်မှာ အချစ်မခံရတဲ့မိန်းမ၊ နွေးထွေးမှုကို တောင့်တနေချိန်မှာ အေးတိအေးစက် ဆက်ဆံခံရတဲ့မိန်းမ၊ ဂရုတစိုက်နဲ့ကြင်နာတာတွေကို မျှော်လင့်နေချိန်မှာ လျစ်လျူရှုခံခဲ့ရတဲ့မိန်းမ အဲ့လိုမိန်းမတွေ အေးစက်သွားတဲ့အခါ ယောက်ျားတွေ မာကျောပါတယ်ဆိုတာထက် ပိုပြီး ကြောက်ဖို့ကောင်းသွားတယ် သူတို့လိုအပ်နေချိန်မှာ သူတို့လိုအပ်ချက်တွေကို […]
သွေးသားရင်း ညီအစ်မရှိတဲ့သူတွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်က ကံအကောင်းဆုံးသူတွေထဲမှာ အပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ အစ်မဆိုတာ ညီမတွေအတွက်တော့ ပထမဆုံးအားကျခဲ့ရတဲ့ စံပြလူသားတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့သလို၊ လေးစားအတုယူစရာကောင်းပြီး အမြဲတမ်း နွေးထွေးမှုတွေ ပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ အစ်မရှိတဲ့သူတွေပဲ ရနိုင်မယ့် အစ်မတစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာတရားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ […]
အာရုံနောက်တာ မကြိုက်ကြဘူး။ အရွဲ့ တိုက်တဲ့ နေရာမှာ နှစ်ယောက် မရှိဘူး။ ဒေါသ ထွက်လာရင် ဘယ်သူမှ တားမရအောင်ထိ သောင်းကျန်းကြတယ်။ အင်္ဂါသားသမီးများဟာ အရမ်း သံယောဇဉ်ကြီးတတ်ကြပါတယ် ဒါပေမဲ့ စကားတအားများတာ ချုပ်ကိုင်တာ ထိန်းချုပ်တာတွေ လုပ်လာရင်တော့ […]
ဘဝဆက်​တိုင်းမှာ ဒီလို​ရောဂါ​ဝေဒနာ​ဆိုး​တွေနဲ့ ကင်း​ဝေးပါ​နိုင်​ပါ​စေ က​လေး​ရေ….
By Uptodate MMPosted on April 4, 2019
ဘဝဆိုတဲ့ ဇာတိတစ်​ခု ရလာသူတိုင်း ဇရာ ဗျာဓိ မရဏဆိုတဲ့ အိုနာ​သေဒုက္ခ​တွေနဲ့ မကြုံချင်​လည်း ကြုံကြရမှာပဲ ဓမ္မတာပါပဲ။ ​ဒီတရား​တွေနဲ့ ကြုံလာတဲ့အခါ မိဘနဲ့သားသမီး ညီနဲ့အကို ​မောင်​နဲ့နှမ ဘယ်​​လောက်​ပဲချစ်​ကြပါတယ်​ဆိုဆို…. လူစားဝင်​​ပေးလို့ မရနိုင်​သလို ဘယ်​သူမှလည်း တားဆီးလို့မရနိုင်​ဘူးဆိုတာ […]
သားဖြစ်သူ ဘွဲ့ယူအမှီ အလုပ်​က​နေ​ပြေး​ရောက်​လားတဲ့ ပန်းရန်​သမားတစ်​ဦးရဲ့ သားဘွဲ့ရအမှတ်​တရဓါတ်​ပုံ​လေး မိဘဟာ ဘယ်​လိုအ​နေအထားပဲဖြစ်​ဖြစ်​ မိဘဟာ မိဘပါပဲ။ မိဘဟာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးလွန်းလို့ စွန်ပယ်ထားတက်ကြသော တချို့သော အရှက်အကြောက်ကြီးတဲ့ သားဆိုး သမီးဆိုးများလည်း ရှိနေသေး တက်ကြပါသေးတယ်။ မိဘရဲ့ တန်ဖိုးကို […]
သြစတြေးလျနိုင်ငံမှ မဟာဘွဲ့ကို ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ရောက်လာခဲ့တဲ့ မစုပုံချစ်
မြန်မာနိုင်ငံမှ သူ့လိုမသန်စွမ်းသူများကိုလည်း စကားလက်ဆောင်ပါးခဲ့ သြစတြေးလျနိုင်ငံ ဆစ်ဒနေမြို့မှာ ပညာတော်သင်သွားရောက်ခဲ့တဲ့ မသန်စွမ်းကျောင်းသူ မစုပုံချစ်ဟာ (Master of Policy Studies – MPS) မဟာဘွဲ့ ကို ထူးချွန်အောင်မြင်ရရှိခဲ့ပြီး ဇူလိုင်လ က မြန်မာနိုင်ငံကို […]